के नेपालमा रेल गुड्न असम्भव छ ? - Ratopati
के नेपालमा रेल गुड्न असम्भव छ ?
- | सविता सापकोटा
आमाको गर्भबाट जन्मने बित्तिकै एउटा बालक खुसीले रुन्छ । संसार देख्न पाएँ भन्ने उत्साहले अनि उमङगले च्याँ–च्याँ गर्छ । के थाहा उसलाई यो धर्तीमा जन्म लिएपछि कति दुःख हुन्छ ? के थाहा उसलाई सपनाको भरमा मान्छेलाई उडाईन्छ, बोलीकी भरमा पागलको उपनाम दिइन्छ । अरुको बोलीको कदरभन्दा पनि आलोचना गर्ने बानी धेरैको हुन्छ । कसैले नयाँ कुराको उद्घोष गर्याे भने त्यसलाई हाँसोको माध्यम बनाईन्छ ।
के रेल नेपालमा गुड्ने कुरा असम्भव छ ? फोहोर संशोधन गरि घर–घरमा पाइप लाइन जडान गर्ने काम असम्भव छ ? आखिर कुन चाहिँ राजनीतिज्ञले आफूले भनेका कुरा पुरा गरेका छन् र ? चुनावको समयमा गाउँमा हस्पिटल बनाइदिन्छ, बाटो बनाइदिन्छु भनेर भोज खुवाउँदै भोट माग्ने कति नेताले आफ्नो प्रतिबद्वता पुरा गरेका छन् ?
आफ्नो देश छोडेर अरुको देशमा पसिना बगाउन बाध्य छन् नेपाली । विकसित मुलुकमा गएर विभिन्न उपाधि हासिल गरे भनेर आफ्नो नाम फैलाउन विवश छन् नेपाली । के नेपालीहरुले आफ्नै देशमा बसेर ती उपाधीहरु हासिल गर्न सक्दैनन् ? बुद्दिजिवी वर्गको लहर छ विदेशमा । त िवर्गलाई नेपालमै राखेर उनीहरुको क्षमता सिचाईं गर्ने उपयुक्त भूमि दियो भने अवश्य नै पुरा हुन्छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सपना । विभिन्न सेमिनार र गोष्ठीमा हामी यस्तो गर्ने सक्छौैं उस्तो गर्ने सक्छौं तर नेपालको राजनीतीले दिएन भन्नेहरुलाई भेला गरेर योजना तयार गर्न सकिन्छ ।
केहि समय अघि ओली सरकार ढलाउने कुरा व्यापक रुपमा चर्चित भयो । धेरैले रेल चढ्न नपाईने भो भनेर फेसबुक र टुईटरमा ओलीलाई व्यङ्ग्य हाने । ओलीले भनेको एउटै बोलीलाई विभिन्न तरिकाले प्रस्तुत गरे ।
सपना सजाउन सबैले पाउँछन् । हजारौं सपना देखिन्छन् तीमध्ये केहि मात्र सफल हुन्छन् । सपना सजाउने मानिस निदाउँन सक्दैन । हरेक प्रहरमा सपनाले घचघचाई रहन्छ । विकास जटिल प्रक्रिया हो र छोटो अवधीमा यो असम्भव छ । उद्घोष गर्ने बित्तिकै यो प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि छैन ।
सपना बुनेपछि निदाउन नसकी कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्ने हो तर सपनालाई फूलबारीको फूल जसरी सजाएर राख्नाले भमराले रस चुस्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । एउटा सगमाथाको चुचुरोमा पुग्ने सपना सजाएको मानिसले धेरै पटक अभ्यास गर्छ, कहिले उ लडछ, कहिले बीच बाटोदेखि नै फर्किन्छ । काम थाल्नुछ, प्रधान्मन्त्रीज्यू लडे भने उठाउन आउने नेपाली जनता छन् । फेसबुक र ट्वीटरमा आए महिवथ केपी ओली भन्ने टेन्ड नै चलेको छ । सर्मथक छन् भन्ने कुरा यहिबाट नै प्रष्ट हुन्छ । सबै कुराको सबल र दुर्बल पक्ष हुन्छन् । विरोधी सबैका हुन्छन् । विरोधी एकातिर कुरा काट्दै गर्छन् त्यही समयमा सर्मथक लिएर अगाडि बढ्नुस प्रधान्मन्त्री ज्यू ।
सपनाको फूलबारी सजाएर गति नलिदाँ भमराहरु नाचिरहेका छन् । जुन कुरा केहि हप्ताअघि आएको सरकार ढल्छ भन्ने विभिन्न राजनीतिज्ञको भाषणले पुष्टि गर्छ ।
आफूले के गरे भन्दा पनि अरुले के गर्यो र उसको बिल्ला गरेर कसरी खुट्टा तान्न सक्छु भन्ने प्रविति धेरै मानिसहरुको हुन्छ । अरुले के बोल्यो र उसको कुरालाई कसरी हावामा उडाउ भन्ने मनोवृतीले ग्रस्त छ नेपाली समाज ।
पानीजहाज खरिद गरेर संचालन गर्ने भन्ने कुरालाई नेपालमै पानीजहाज गुडाउने भनेर धेरैले व्यङग्य हाने । युद्व, कोलाहल, नाकाबन्दी, नेपालबन्द जस्ता कुरामा बानी बसेका नेपालीहरुलाई अवश्य नै विकासका कुरा आश्चर्य नै लाग्छ । ३ महिने लामो आन्दोलनले समेत नपुगेर अझैँ आन्दोलन गर्ने अगाडि सर्ने मधेसीलाई विकासको कुरा पच्दैन् । दिनहुँ मिटिङ र गोष्ठी गरी अरुलाई भड्काउने कार्य उनीहरुबाट नै हुन्छ ।
असम्भव भन्ने कुरा केहि पनि छैन् । एउटा कार्य दिशा तयार गरेर नियमित अभ्यासमा लाग्ने हो भने आफ्नै देशको स्रोतहरुको सदुपयोग गरी देशलाई समृदिको बाटोमा डोर्याउन सकिन्छ । एउटा यस्तो शक्तिको खाँचो छ जसले उचित नक्सा तयार गरी कामको सुरुवात गरोस् । जब कामको थालनी हुन्छ त्यसपछि थुक निल्नेको कमि हुँदैन । मैले पनि त्यो काम गर्ने चाहन्थे भन्नेको कमि हुँदैन ।